Shirka Dhusamareb-3 oo la xagal daaciyay, qalalaasena madaxa la galay | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya waxay u afduuban tahay Madaxweyne Farmajo oo ka go’aan tahay inuu xoog ku haysto xukunka.
1. Inuu si daacadnimo ah u aqoonsan yahay go’aannadii lagu gaaray dhuusamareb 1 iyo 2, kuna shaqeynayo;
2. In heshiiska lagu gaaro dhusamareb 3 ay si buuxda u fulineyso xukuumadda uu dhisayo muddo 15 maalmood.
3. In Barlamaanka Federaalka ka kooban yahay Golaha Shacbiga iyo Aqalka Sare, isla markaana aysan waxba ka jirin dhammaan sharciyada aysan wada ansixin labada aqal ee Barlamaanka federaalka.
4. In beesha Caalamka taagerto shirka dhusamareb 1,2,3, kana codsato inay gacan ka geysato xallinta khilaafaadka taagan ama imaan kara ilaa fulinta heshiiska kama dambeyska ah.
5. Inuu ballan qaadayo fulinta is afgaradyadii horey dhexmaray DF iyo DG.